२ वर्षदेखि निरन्तर वि;र्य सँधै यो;नीमा झा,र्छु तर पनि वच्चा बस्दैन, के मेरो वि,र्य पातलो भएर हो ? – Gazabkonews
२ वर्षदेखि निरन्तर वि;र्य सँधै यो;नीमा झा,र्छु तर पनि वच्चा बस्दैन, के मेरो वि,र्य पातलो भएर हो ?
प्रश्न स्मेरो विवाह भएको चार वर्ष भयो । पछिल्लो २ वर्षदेखि निरन्तर वी-र्य यो-नीमा झा-र्ने गरेको छु । धेरै पटक यस्तो भैसक्यो । तर वच्चा बस्दैन । हामीले के गर्नुपर्छ रु बच्चा कसरी बस्छ ? कति पटक भित्र झा-र्ने हो र कसरी ? जहिले पनि अलिकति वी-र्य बाहिर निस्कनुको कारण के होला ?
तपाईंहरू श्रीमान्–श्रीमतीले सल्लाह गरेर आफूले चाहेको बेला सन्तान जन्माउन सक्नुहुन्छ । विवाह भएको भर्खर चार महिना मात्र हुँदैछ । उमेर त लेख्नुभएको छैन, तर सन्तान जन्माउने हतार भएको हो वा होइन भन्ने कुरा पत्रमा स्पष्ट छैन । उमेरको कुरा गर्दा २० वर्षभन्दा पहिले सन्तान जन्माउनुलाई आमा र शिशुको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन । परिवार नियोजनको अर्थ कहिले र कतिवटा सन्तान जन्माउने भनेर आफैंले लिइएको निर्णय अवलम्बन गर्नु हो तर बोलिचालीको भाषामा हामीले परिवार नियोजन गर्ने भन्नाले सन्तान नजन्माउने कुरा बुझ्छौं ।
प्रेमीले छोडिदिए साम्राज्ञीलाई